Doorashada Aqalka Hoose ee BFS oo Muqdisho Ka Socota – Goobjoog News
Doorashada Aqalka Hoose ee BFS oo Muqdisho Ka Socota
2 kursi oo ka mid ah kuraasta aqalka hoose ee Baaralmaanka Federaalka Soomaaliya ee beelaha Banaadiriga ayaa maanta lagu dooranayaa magaalada Muqdisho.
Waxaa hadda ka socota xarunta doorashada ee Muqdisho ee Xero Gaadiid doorashada xubnihii ka harsanaa aqalka hoose ee beelaha Banaadir iyadoo lagu tartamayo 2-kursi oo midi yahay qoondo Haween, dumar kaliyana ay ku tartamayaan.
Magacyada Murashixiinta Kuraasta:
Waxaa ku tartamaya laba haween ah oo kala ah;
Biibi khaliif Maxamed.
Qamar Islow Nuur.
Waxaa ku tartamaya Saddex qof oo kala ah;
Caamir Axmed Maxamed.
Lutfi Shariif Maxamed.
Shariif Maxamed Cali.
Doorashada kuraastan ayaa ka dhigan in lasoo gabagabeeyay doorashada aqalka hoose ee beelaha Banaadiriga ah oo 5 ka mid ah horey loo doortay, halka labdii harsanaa saacadaha soo aaddan ay soo baxayaan.
Buy Periactin 4mg Kamagra Dangerous Force cialis 20mg price...
Plavix At Discount Pharmacy Online Med Buy Cialis Pharmacie...
Levitra Shop Erfahrung Baclofene Douleur Doxycycline 150 Mg...